Ingkụzi Freemium Ntughari Pụtara Serdị Oké Banyere Nyocha Ngwaahịa | Martech Zone
Ma ị na-ekwu Rollercoaster Tycoon ma ọ bụ Dropbox, onyinye freemium gaa n'ihu na-adị ụzọ a na-ahụkarị iji dọta ndị ọrụ ọhụụ na ngwaahịa na ngwa ahịa sọftụwia. Ozugbo ha banyere n'elu ikpo okwu a na-akwụghị ụgwọ, ụfọdụ ndị ọrụ ga-emecha gbanwee gaa na atụmatụ akwụ ụgwọ, ebe ọtụtụ ndị ọzọ ga-anọ n'ọkwa n'efu, ọdịnaya ọdịnaya ọ bụla ha nwere ike ịnweta. Research na isiokwu nke mgbanwe freemium na njigide ndị ahịa hiri nne, a na-agbakwa ụlọ ọrụ ume ka ha mekwuo mmụba na ntụgharị freemium. Ndị ahụ nwere ike iguzosi ike inweta nnukwu ụgwọ ọrụ. Iji ojiji nke nchịkọta ngwaahịa ga-enyere ha aka iru ebe ahụ.
Njirimara njirimara na-akuko akuko a
Olu data na-abata site na ndị ọrụ ngwanrọ na-atụ ụjọ. Ihe ọ bụla eji eme n'oge ọ bụla na-agwa anyị ihe, na nchikota nke mmụta ndị ahụ na-enyere ndị ọrụ ngwaahịa aka ịghọta njem onye ahịa ọ bụla, site na itinyekwu nchịkọta ngwaahịa ejikọrọ na ya. igwe ojii data nkwakọba. N'ezie, olu data abughi nsogbu ahụ. Inye ndị otu na-enye ngwaahịa nnweta data ahụ ma nyere ha aka ịjụ ajụjụ na ịkọwapụta ụzọ akọ nwere ike ịdị — nke ahụ bụ akụkọ ọzọ.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-eji nyiwe nchịkọta nyocha nke usoro mgbasa ozi na BI ọdịnala dị maka ile anya ọnụọgụ nke usoro akụkọ ihe mere eme, ndị otu ngwaahịa anaghị enwe ike iji ngwa ngwa nweta data ịjụ (ma zaa) ajụjụ ndị ahịa na-achọ ịchọrọ. Kedu atụmatụ ndị a na-ejikarị eme ihe? Kedu mgbe njiri njirimara na-agbadata tupu ịhapụ ya? Kedu ka ndị ọrụ si eme na mgbanwe na nhọrọ nke njirimara na ọkwa n'efu na nke akwụ ụgwọ? Na nchịkọta ngwaahịa, ndị otu nwere ike ịjụ ajụjụ ka mma, wulite echiche dị mma, nwalee nsonaazụ ma mejuputa ngwa ahịa na ụzọ mgbanwe ngwa ngwa.
Nke a na-eme ka nghọta dị omimi banyere njirimara onye ọrụ, na-enye ndị otu ngwaahịa ohere ilele ngalaba site na iji njirimara, ogologo oge ndị ọrụ nwere ngwanrọ ma ọ bụ oge ole ha ji ya, njirimara ndị ọzọ na ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta na ojiji nke otu njirimara karịrị akarị n'etiti ndị ọrụ na ọkwa n'efu. Ya mere, mee ka njirimara a gaa na ugwo ugwo ma tụọ mmetụta ya na mmelite abụọ na ọkwa akwụ ụgwọ na ọnụego akwụghị ụgwọ. Ngwá ọrụ ọdịnala BI naanị ga-abịa mkpụmkpụ maka nyocha ngwa ngwa banyere mgbanwe dị otú ahụ
Ikpe nke Bad-Tier Bad
Ebumnuche nke ọkwa a na-akwụghị ụgwọ bụ ịkwanye ọnwụnwa nke na-eduga na nwelite mmecha. Ndị ọrụ na-adịghị ebuli na atụmatụ a na-akwụ ụgwọ na-abụ ebe ọnụahịa ma ọ bụ na-akwụpụ. Onweghi ihe ha na enweta ego ndenye aha ha. Nchịkọta ngwaahịa nwere ike inwe mmetụta dị mma na nsonaazụ abụọ a. Maka ndị ọrụ na-apụ, dịka ọmụmaatụ, ndị otu ngwaahịa nwere ike inyocha otu esi eji ngwaahịa (ruo ọkwa atụmatụ) dị iche n'etiti ndị ọrụ na-apụ ngwa ngwa na ndị na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime oge.
Iji gbochie ịhapụ ngwa ngwa, ndị ọrụ kwesịrị ịhụ uru ozugbo site na ngwaahịa ahụ, ọbụlagodi na ọkwa n'efu. Ọ bụrụ na anaghị eji atụmatụ arụ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ ihe na-egosi na usoro mmụta na ngwaọrụ dị oke elu maka ụfọdụ ndị ọrụ, na-ebelata ohere ọ bụla ha ga-atụgharị na ọkwa akwụ ụgwọ. Nchịkọta ngwaahịa nwere ike inyere ndị otu aka nyochaa iji njirimara rụọ ọrụ ma mepụta ahụmịhe ngwaahịa ka mma nke nwere ike ibute ntụgharị.
Na-enweghị nchịkọta ngwaahịa, ọ ga-esiri ike (ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume) maka otu ngwaahịa iji ghọta ihe kpatara ndị ọrụ ji akwụsị. BIdị ọdịnala agaghị agwa ha ihe karịrị ọtụtụ ndị ọrụ chụpụrụ, ọ gaghị akọwakwa etu na ihe kpatara ihe na-eme n'azụ Mpaghara.
Ndị ọrụ na-anọ n'ọkwa n'efu ma na-aga n'ihu na-eji njirimara nwere oke na-eweta ihe ịma aka dị iche. O doro anya na ndị ọrụ na-enweta uru site na ngwaahịa a. Ajuju a bu ka esi ebinye nkwado ha na kpalie ha n'ọkwá a na-akwụ ụgwọ. N'ime otu a, nchịkọta ngwaahịa nwere ike inyere aka ịchọpụta ngalaba dị iche iche, sitere na ndị ọrụ na-adịghị adị (ọ bụghị ihe dị mkpa) nye ndị ọrụ na-agbanye ókè nke nnweta ha n'efu (akụkụ dị mma iji lekwasị anya na mbụ). Otu ngwaahịa nwere ike nwalee etu ndị ọrụ a si emeghachi omume na njedebe ọzọ na nnwere onwe ha n'efu, ma ọ bụ ndị otu ahụ nwere ike ịnwale usoro nkwukọrịta dị iche iji gosipụta uru nke ọkwa akwụ ụgwọ. Site na ụzọ ọ bụla, nchịkọta ngwaahịa na-enyere ndị otu aka ịgbaso njem ndị ahịa ma mepụta ihe na-arụ ọrụ n'ogologo ndị ọrụ.
Na-eweta Uru Na Oge Ndị Ahịa niile
Ka ngwaahịa a na-adịwanye mma maka ndị ọrụ, ngalaba dị mma na mmadụ ga-apụtawanye, na-enye nghọta maka mkpọsa nwere ike ịdọta ndị ahịa na-ele anya. Ka ndị ahịa na-eji ngwanrọ na-agafe oge, ndị nyocha ngwaahịa nwere ike ịga n'ihu na-enweta ihe ọmụma site na data onye ọrụ, na-edepụta ndị ahịa njem site na nkwụsị. Ghọta ihe na-adọ ndị ahịa azụ - ihe ndị ha mere na ndị ha jiri, otu ojiji gbanwere oge - bụ ozi bara uru.
Dika achoputara onye mmadu no n’ime ihe ize ndụ, nwalee iji hu uzo di iche iche nke ndi nkwekorita di nke oma n’ilebe ndi n’ile anya ma webata ha n’ime ugwo. N'ụzọ dị otú a, nyocha dị mma na ihe ịga nke ọma ngwaahịa, na-akpali mmelite atụmatụ nke na-eduga ọtụtụ ndị ahịa, na-enyere aka ịchekwa ndị ahịa dị adị ogologo oge na iwulite ụzọ ahịa ngwaahịa ka mma maka ndị ọrụ niile, nke ugbu a na ọdịnihu. Site na nchịkọta ngwaahịa jikọtara ya na ebe nchekwa data igwe ojii, ndị otu ngwaahịa nwere ngwaọrụ iji jiri oke data wee jụọ ajụjụ ọ bụla, mepụta echiche ma nwalee etu ndị ọrụ si aza.
Tags: ndenye aha n'ihe egwuọgụgụ isi azụmahịaigwe ojii data nkwakọbanjem ndị ahịangwanrọ ụlọ ọrụfree ọkwafreemiumfreemium ntughariugwo onusaasNdebanye aha ngwanrọndebanye aha